Fametrahana tsy misy mpanamory (DALXX_XX)
Maninona no miasa @ Technologies Application Delta
mandeha ho azy
Rafitra iraisan'ny singa
Rivotra mifono rivotra
Guns / Valves
Basy manafody mahamay
Fametrahana pump / dosing
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in Rivotra mifono rivotra
Fametrahana tsy misy fotony
Ny DAL35-70 sy DAL50-210 miaraka amin'ny tahan'ny fanerenany 35/1, 50/1 ary ny volume / cycle 70 ml, tsirairay 210 ml dia novolavolaina ho toy ny fametrahana tsy manara-penitra tsy manam-paharoa ahafahana manarona ny rindranasan'ny mpanjifantsika. Ireo fametrahana ireo dia azo ampiasaina handefasana ireo mpandoko tsiranoka avo kokoa, varnis ary tsiranoka ambany kely hafa.
Ny fametrahana dia misy pump, filter, hosotra tsindry ary basy fanamoriana. Ny pompa dia feno fenox ary azo apetraka amin'ny sarety, mankany amin'ny rindrina na amin'ny tripod tsy tapaka.
Ireo voatavo hafa dia azo amboarana. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny ekipan'ny mpivarotra.
Raha mila fampahalalana fanampiny ianao na misy fanontaniana, soso-kevitra na fanehoan-kevitra, azafady mifandraisa aminay:
►mandeha ho azy
►Rafitra iraisan'ny singa
▼Rivotra mifono rivotra
►Guns / Valves
© Teknika fampiharana Delta. Zo rehetra voatokana.